Ezona ndawo zincinci zincinci zasemanzini, iimpawu zazo kunye neengcebiso | Ngeentlanzi
Amanzi amancinci amancinci
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Amanzi akwariyam akwariyam
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamanzi akhonza ukugcina isixa esikhulu okanye esincinci seentlanzi. Namhlanje sithetha ngayo ii-aquariums ezincinci. Ezi ndawo zasemanzini zenzelwe bonke abo bantu bafuna ukuba nemizekelo embalwa yeentlanzi njengezilwanyana zasekhaya okanye banendawo encinci ekhayeni labo. Nangona i-aquarium incinci, kufuneka wazi zonke iimpawu eziyimfuneko ekusebenzeni ngokuchanekileyo kweeparameter ze-aquarium kunye neemfuno zentlanzi.
Ke ngoko, kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona ndawo zincinci zincinci zasemanzini ezinokuthi zilungelelaniswe neemeko ezahlukeneyo.
1 Ezona ndawo zincinci zincinci zasemanzini
1.1 Isidima- Iglasi ye-Aquarium enesigqubuthelo kunye nezibane ze-LED
1.2 DADYPET Intlanzi
1.3 I-Marina Aquarium Kit ene-5G ukukhanya kwezibane
1.4 ICA KNA20 Nano AquaLED ICrystal 20
1.5 Ikhithi yeFluval Flex Aquarium
2 Bungakanani ubukhulu be-aquarium encinci?
3 Yintoni ekufuneka ibe nayo i-aquarium encinci epheleleyo
4 Zingaphi iintlanzi ekufuneka uzifake kwi-aquarium encinci? Zithini iinjongo?
5 Ungayihombisa njani i-aquarium encinci
Ezona ndawo zincinci zincinci zasemanzini
Isidima - iAquarius ye ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Ubunene-Intlanzi encinci, ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Ubunene-7L iiAquariums kunye ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Ubunene-14L iiAquariums kunye ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Iitanki zeentlanzi.... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	Isidima - iAquarius ye ...
Umgangatho wexabiso	Ubunene-Intlanzi encinci, ...
Oyintandokazi yethu	Ubunene-7L iiAquariums kunye ...
Ubunene-14L iiAquariums kunye ...
Isidima- Iglasi ye-Aquarium enesigqubuthelo kunye nezibane ze-LED
Isidima - iAquarius ye ...
Le aquarium inenkqubo yokuhluza yendalo. Esi sihluzo sibandakanyiwe kwinxalenye ephezulu kwaye siyakwazi ukucoca konke ukungcola okuncinci ukwandisa umgangatho wamanzi. Isihluzi senziwe ngomqhaphu osebenza kakuhle. Ukuze wonge kwibhili yombane kwaye uphucule umgangatho wendalo, inevolthi ephantsi eluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe kwe-LED. Ndiyabulela koku sinokonga amandla kwaye sikhusele imeko-bume ye-aquarium.
Impompo yecebo lokucoca ulivuziwe ukusuka ekumpompa ukuya kwi-250 yeelitha iyure nganye. Umthamo opheleleyo we-aquarium ziilitha ezili-14 kuphela. Kucetywayo ukuba neentlanzi ezimbalwa kunye ezincinci. Iglasi yayo ibonelela kuluhlu lwe-panoramic yetanki liphela lokuhombisa ukongezwa. cofa apha ukuze ukwazi ukufumana le aquarium encinci.
Akukho mveliso ifunyenweyo
Itanki encinci yentlanzi yakhiwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu. Izinto zayo zinokuxhathisa i-acrylic phantse kuyo nayiphi na impembelelo kwaye inoyilo oluhle. Inombane ophantsi ombane oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe we-LED okonga umbane. Eli gama linika ubomi kubume bamanzi kunye nokuphucula umgangatho wentlanzi. Yindawo encinci yokugcina amanzi ekulula ukuyifaka nokuyigcina. Inoyilo olunomdla kakhulu ukuphucula umhombiso wasekhaya.
Inekhithi exhotyiswe ngempompo yemvula yamandla ayi-3.5W kunye nesibane senkxaso yamanzi yengca engama-6 * 4.5W. Kulungile ukuba nentlanzi yetropiki, intlanzi yegolide okanye ibetta. Ukuba ucofa Akukho mveliso ifunyenweyo ungathenga le modeli.
I-Marina Aquarium Kit ene-5G ukukhanya kwezibane
I-Marina Aquarium Kit kunye ...
I-aquariums yohlobo lweMarina ilungile kuba yakhiwe ngeglasi kwaye inecebo lokucoca ulwelo kunye nenkqubo yokutshintsha kwekhatriji ekhawulezayo eyenza ukuba ulondolozo lube lula ngakumbi kwaye lube nescreen esihle kunye nescreen. Inkqubo yayo yokukhanyisa ikuluhlobo lwe-LED kwaye ihlala ixesha elide. Uncedo loku kukhanya kukuba Inomphumo wendalo ukwenza iintlanzi zikhululeke. Kuyanceda ukulinganisa iimeko zendalo. Inomnatha owenziwe ngomnatha ocolekileyo wokukhusela amaphiko entlanzi. Ungacofa apha ukuthenga le aquarium encinci.
ICA KNA20 Nano AquaLED ICrystal 20
ICA KNA20 Nano AquaLED ...
Le modeli ye-aquarium nayo incinci ngobukhulu. Inobuninzi be-20 L. Kucingelwa ukuba zineendidi ezimbalwa zeentlanzi. Inokukhanya kwe-LED eyilelwe ukugcina ukukhanya okukhulu. Yiza nekhithi enefilter esezantsi, isikrini esidityanisiweyo, isibane se-LED ukubeka ukukhanya kunye nokunye ukutya kwentlanzi. Inesikhokelo se-aquarium nayo yonke imiyalelo yokuququzelela ukufakwa kunye nokugcinwa kwayo. cofa apha ukuthenga le modeli.
Ikhithi yeFluval Flex Aquarium
Ikhithi yeFluval Flex ...
Imodeli yolu hlobo lwe-aquarium yenzeka ngoku kwisitayile. Inomphambili ojijekileyo owenza ukuba wahluke kwezinye iimodeli. Inefilitha yamanqanaba amathathu enefilitha enamandla kunye nolawulo olukude Isebenza nge-infrared. Enkosi kolawulo olukude sinokukhetha imibala eyahlukeneyo kunye neziphumo ezizodwa ukuphucula umhombiso wale aquarium. Singahluka phakathi kuluhlu olubanzi lwemibala esusela kobomvu, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Unokwenza le aquarium ngokungqinelana nemibala yegumbi lonke. Ukuba ucofa apha ungathenga le modeli.
Bungakanani ubukhulu be-aquarium encinci?
Ubungakanani be-aquarium encinci bunokwahluka ngokuxhomekeke kumsebenzi oza kunikwa. Ukuba le nto siyifunayo yitanki leentlanzi eliseofisini elikwigumbi elincinci, i-aquarium enomthamo weelitha ezi-7 iya kwanela. Ngaphezulu kwemilinganiselo ye-aquarium, ubukhulu be-aquarium buhlala bukhethwa kumthamo wayo kunye nevolumu. Ii-aquariums ezincinci zihlala ziphakathi kwe-7 kunye ne-30 yeelitha zomthamo, Eyona idumileyo yile yeelitha ezingama-20.
Ezincinci zilula ukungena kwihlabathi lee-aquariums okanye ukuba ufuna ukunika abantwana isipho. Yonke into iya kuxhomekeka kusetyenziso oluza kunikwa kunye nenani leentlanzi esifuna ukuzigcina. I-aquarium encinci lolona khetho lufanelekileyo ukuba ufuna ukuqala kweli hlabathi.
Yintoni ekufuneka ibe nayo i-aquarium encinci epheleleyo
Nangona i-aquarium incinci, kufuneka ibenazo zonke izixhobo ezinamanzi amakhulu. Into yokuqala kukuba ne-substrate yokuseka iintlanzi. Amanzi kufuneka abe semgangathweni kwaye kufuneka abe nenkqubo yokuhluza. Ukukhanyisa kubalulekile ngokuxhomekeke kwiintlobo zeentlanzi esinazo. Iindawo ezincinci zasemanzini zifuna imisebenzi yolondolozo njengaleyo mikhulu. Kufuneka ugcine amanzi ekwimeko elungileyo kwaye eneoksijini elungileyo.
Inokuba ngumdla wokuba ne- ioksijini yasemanzini.
Zingaphi iintlanzi ekufuneka uzifake kwi-aquarium encinci? Zithini iinjongo?
Kukho umgaqo owaziwayo osisentimitha ukusuka kwilitha nganye yamanzi. Lo mgaqo ukuxelela ukuba kuxhomekeke kwinto nganye imilinganiselo yentlanzi, uyakudinga x iilitha zamanzi. Lo mthetho awusebenzi ngokupheleleyo njengoko kuxhomekeke kwezinye izinto ezinje ngobukho beendawo zokufihla, izityalo zasemanzini kunye nobungakanani be-aquarium. Ayizizo zonke ii-aquariums ezincinci ezilinganayo. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo isini sentlanzi kunye neentlobo (ezinye iintlanzi zinendawo ngakumbi kunezinye). Ke ngoko, akukho nani lithile elinokuthiwa. Ityala ngalinye kuya kufuneka lifundwe.
Ungayihombisa njani i-aquarium encinci
Ukuhombisa i-aquarium yakho kufuneka ukhumbule ukuba kuncinci okungaphezulu. Akufuneki sigcwalise i-aquarium ngokuhombisa, nokuba incinci okanye inkulu. Kuxhomekeka kubungakanani be-aquarium, nokuba incinci na, iya kuba sisigqibo sokuseka izityalo ezingasemva ezinceda ukwandisa umhombiso. Kuya kufuneka sifunde nokuba kufanelekile na ukuseka izityalo ezingezizo okanye ezendalo.
Enye yezinto ezinceda kakhulu ukuhombisa ii-aquariums kukudalwa kweendawo ezincinci zokufihla. Ukwenza oku siza kusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zamatye eziza kusinceda sikwazi ukufihla iintlanzi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neendawo ezincinci zasemanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi amancinci amancinci
"Intlanzi yam ijonge phantsi, ndingenza ntoni?"